FANDRAISANA MPIASAM-PANJAKANA – Nisaotra ny ministera ny Collectif des Normaliens de Madagascar (CNM) - Ministère de l'Education Nationale
FANDRAISANA MPIASAM-PANJAKANA – Nisaotra ny ministera ny Collectif des Normaliens de Madagascar (CNM)
Mpampianatra 286 avy amin’ny lalam-piofanana ho mpampianatra matihanina no voaray ho mpiasampanjakana eo anivon’ny ministeran’ny fanambeazam-pirenena. Nivoaka ny Zoma 04 Desambra 2015 ny lisitra tena izy ho an’ireo mpampianatra ireo. Manoloana izany dia nisy ny fivoriam-be notanterahan’ny Collectif des Normaliens de Madagascar (CNM) teny amin’ny trano malalaky ny ministeran’ny fanambeazam-pirenena Anosy androany Alarobia 09 Desambra 2015. Fanaovana tatitra tamin’ny kongresy izay natao ny 25-26 Septambra teo, ny fisaorana ny ministeran’ny fanambeazam-pirenena tamin’ny fandraisana azy ireo ho mpiasampanjakana no niompanan’ny fivoriam-be tamin’izany. Ny tale jeneralin’ny fanambeazam-pirenena Dr Todisoa Andriamampandry raha nandray fitenenana dia nanamarika fa ny ankamaroan’ ireo Proviseur, sefo Cisco dia efa avy amin’ny Capenien avokoa.
Miady mafy ho anareo, ho an’ny Fram ny tenako hoy izy. Misy ny tsy voaray ho mpiasampanjakana aminareo ireo fa mbola hisy afaka telo volana ny fandraisana mpiasampanjakana iray alina vaovao. Ireo Capenien vao nivoaka ihany koa hoy izy dia tonga dia ho mpiasampanjakana. Nanafatra ireto mpiasampanjakana vaovao ireto ihany koa ny tenany ny amin’ny tokony hanekena ny toerana izay hanendrena azy ireo ary ny mba hanatontosan’izy ireo ny asany tsara. Ny ministera dia miezaka mijery antsika Capenien hatrany ary vonona hiara hiasa amintsika.Marihina moa fa ny CNM dia « Plateforme » ivondronan’ ireo syndicat normaliens rehetra niveau1, niveau2, niveau3 eto Madagasikara.